ကိုယ်နှင့်မကွာ သွားလေရာသယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်မည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်တိပိဋက
ပြည်တွင်းနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ သာသနာပြုဘုန်းတော်ကြီးများနှင့်ဓမ္မကို လေ့လာသင်ယူဆည်းပူးနေသူများ အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သော အိတ်ဆောင်တိပိဋကနည်းပညာ ပစ္စည်းတစ်မျိုးကို ထုတ်လုပ်လိုက်ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါအိတ်ဆောင်တိပိဋက၌ ၀ိနယ၊ သုတ္တန္တ၊ အဘိဓမ္မဟူသော ပိဋကအားဖြင့် (၃) ပုံ၊ ဒီဃ၊ မဇ္ဈိမ၊ သံယုတ္တ၊ အင်္ဂုတ္တရ၊ ခုဒ္ဒကဟူသော နိကာယ်အားဖြင့် (၅) ရပ်၊ ဓမ္မက္ခန္ဓာအားဖြင့် (၈၄,၀၀၀) များပြားလှသော ပိဋကပါဠိတော်နှင့် ယင်း၏ ၃ ဆမျှရှိသောအဖွင့် အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာ၊ အနု၊ မဓု၊ ယောဇနစသည့် ကျမ်းဂန်အရပ်ရပ်ရှိပုဒ်ပါဠိများကို မြန်မာအက္ခရာရှိ မင်အက္ခရာများဖြင့် အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ပါကြောင်းသိရသည်။ ထို့အပြင် ပါဠိဝေါဟာရပုဒ်များ အားလုံးပါဝင်ပြီး မြန်မာရဟန်းတော်များရေးသားပြုစုထားသည့် တိပိဋကပါဠိ- မြန်မာအဘိဓါန်ကြီး ဦးဟုတ်စိန်၏ ပါဠိ- မြန်မာအဘိဓါန်စသည့် အဘိဓါန်များပါဝင်သည့်စက်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
သိရှိလိုသည့်စာလုံးများကို အဘိဓါန်တွင်ရှာဖွေရာတွင် ရှာဖွေလိုသောစကားလုံးအား မြန်မာ roman စာလုံးဖြင့် အဘိဓါန်များတွင်ရှာဖွေနိုင်ပြီး၊ တွေ့ရှိချက်များအား တိပိဋကပါဠိမြန်မာအဘိဓါန်၊ ဦးဟုတ်စိန်အဘိဓါန်နှင့် ဓါတ် english တို့ကိုဖော်ပြပေးပြီး တိပိအဘိဓါန်အတွင်းရှိ စာအုပ်နှင့်စာမျက်နှာကိုဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့အပြင် ရှာဖွေသည့်စာလုံးအဖြစ်စတင်သည့် သုတ်ခေါင်းစဉ်များကို ရှာဖွေပြီးတွေ့ရှိသည့် ဂါထာသုတ္တံတို့၏တည်နေရာ စာအုပ်အား စာမျက်နှာအားတိကျ စွာညွှန်းပြပြီး ဆဋ္ဌမ စာမျက်နှာအတိုင်းတွေ့ရှိသည့် မူလ၊ အဋ္ဌကဃာ၊ ဋီကာတို့တွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပြီး ဖတ်ရှုနေစဉ်တွေ့မြင်ရသော ဝေါဟာရစာလုံးအားရွေးချယ်၍ အဘိဓါန်တွင် ဆက်လက်ရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ စာလုံးတွဲများ ကို အလိုအလျောက်ခွဲခြားပြသခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ပြသခြင်းများကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးကြောင်းသိရသည်။
ကျမ်းစာများကို ရှာဖွေဖတ်ရှုခြင်း၌ ဆဋ္ဌသံဃာယနာတင် ပုံနှိပ် မူပါဠိစာအုပ် ၁၅၉ အုပ်အား မူရင်း စာမျက်နှာအလိုက်မြန်မာပါဠိ roman pal တို့ဖြင့်လိုအပ်ရာစာမျက် နှာကို ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ကြောင်းသိ သိရသည်။ တည်ပုဒ် (စာလုံး) များအားရှာဖွေရာတွင် ရှာဖွေလိုသည့်စာလုံးအား ပါဠိတော်အတွင်း မတူညီစွာတည်ရှိနေသော စာလုံး ၁ သန်းခန့်မှ ရွေးချယ်ပြီးစာအုပ် ၁၅၉ အုပ်အတွင်း မည်သည့်ကျမ်းတွင် မည်သည့်စာမျက်နှာပါရှိသည်ကို ရှာဖွေညွှန်းပြပေးပြီး အဆိုပါစာ မျက်နှာတွင် မည်သို့ပါရှိသည်ကို သိရှိရန်ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ တစ်နေရာထက် ပိုမိုတွေ့ရှိပါကလည်း ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးထားကြောင်းသိရသည်။ စာလုံးမတွေ့ရှိပါက ရှိသည့်စာလုံးများမှ အနီးစပ်ဆုံးရွေးချယ်နိုင်ရန် ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ဖတ်ရှုနေစဉ်မြန်မာ roman စာလုံးကိုပြောင်းလဲနိုင်မည်ဖြစ်သလို၊ ဖတ်နေသည့်စာမျက်နှာရှိ စာလုံးအားလုံးကို အ ဘိဓါန်တွင် ဆက်လက်ရှာဖွေနိုင်ကြောင်းသိရသည်။
အိတ်ဆောင်တိပိဋကစက်တွင် အခြားသောလုပ်ဆောင်နိုင်မှုများအနေဖြင့် MP3 နှင့်အသံဖိုင်များကို ဖွင့်နိုင်ခြင်းအသံသွင်းနိုင်ခြင်း၊ MP4 AVI နှင့် အခြားရုပ်ရှင်ဖိုင်များအား ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း၊ Microsoft office 2003, 2007 ၏ word, excel, powerpoint များကိုဖတ်ရှုခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ PDF ဖိုင်များကို ဖတ်ရှုနိုင်ခြင်း၊ လိပ်စာများမှတ်သားခြင်း၊ ရှာဖွေနိုင်ခြင်း၊ ပြက္ခဒိန်တွင်လုပ်ဆောင်ရန်များ မှတ်တမ်းတင်သတိပေးစေခြင်း၊ wifi ရှိသောနေရာတွင် အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသိရသည်။
Windows Mobile 6.1 OS ကိုအသုံးပြုထားသဖြင့် ဂဏန်းတွက်စက်၊ ဂိမ်းစသည်တို့နှင့်လိုအပ်သည်များကို ထပ်မံထည့်သွင်းသုံးစွဲနိုင်ခြင်းနှင့် USB 2.0 ကိုအသုံးပြု၍ PC (Windows/ Mac) တို့နှင့် ချိတ်ဆက်သုံးစွဲနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ Bonous အနေဖြင့် မဟာဂန္တာရုံဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အခြေပြုပဋ္ဌာန်းတရားတော်အသံဖိုင် ၁၉ နာရီနှင့် pdf စာအုပ်ဖတ်ရှုရန်ထည့်သွင်းပေးထားသလို မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်၊ အင်္ဂလိပ်မြန်မာ online dictionary ဖြစ်သော Omagai Dictionary ကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားကြောင်းသိရသည်။
“အိတ်ဆောင်တိပိဋကစက်ကို Mandalay ICT Expo 2009 မှာ စတင်ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါ တယ်။ စက်ရဲ့သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းက နှစ်သိန်းတစ်သောင်းကျပ်ဖြစ်ပြီး ပြပွဲမှာ တစ်သိန်းကိုးသောင်းကိုးထောင်ကျပ်နဲ့ ရောင်းချပေးမှာပါ။ ရန်ကုန်အတွက်ကတော့ မစီစဉ်ရသေးပါဘူး။ Inforithm ကဖြန့်မယ့်ပုံရှိပါတယ်။ ဒီ pocket PC က windows mobile 6.1 ကိုသုံးထားပါတယ်။ စက်မှာအသုံးပြုထားတဲ့ CPU က RAM 9400 MHz ဖြစ်ပြီး memory က 128 MB နဲ့ Storage SD က 4GB ဖြစ်ပါတယ်။ WiFi ပါပြီး screen က ၂.၈ လက်မရှိပါတယ်။ USB 2.0 mini, mic, built in speaker တွေပါဝင်ပြီး အလေးချိန်ကတော့ 96g ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်အစားမှာ ၉၇/၆၂/၁၇ mm ဖြစ်ပြီး ၉၀၀ က AH Battery ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်” ဟု Alpha ကွန်ပျူတာ (မန္တလေး) မှတာဝန်ရှိသူ ဦးရဲမြတ်သူမှအင်တာနက်ဂျာနယ်သို့ပြောသည်။
၀ယ်ယူအသုံးပြုလိုသူများ စက်နှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုသူများအနေဖြင့် အမှတ်-၂၀၆၊ ၈၅ လမ်း၊ ၃၉ လမ်းထောင့်၊ မန္တလေး၊ ဖုန်း-၀၂-၆၃၂၅၂ နှင့် ၇၃၃၉၅၊ ၀၉-၂၀၀၅၃၄၁ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ကြောင်းသိရသည်။
Posted by yankin at 9:34 PM No comments:
FIVE WAYS OF SPEED UP YOUR PC
(၁)ပထမဦးစွာ Start-->Run ကိုသွားပါ Run Box ထဲတွင်
prefetch ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ..ပြီးရင် Enter
ပေါ်လာတာအားလုံးကို Ctrl+Aကိုတွဲနှိပ်ပြီးSelect All
(၂)ဒုတိယနည်းကတော့Start-->Run ကိုထပ်သွားပါ..Run Box
မှာ sysdm.cplကိုရိုက်ထည့်ပြီးEnter ခေါက်လိုက်ပါခင်ဗျာ.
ထိုနောက် System Properties ပေါ်လာပါမယ်..
ကိုကလစ်လိုက်ပါ.ပြီးရင်Adjust for best performance ကို
ကိုရှာပါ.Right Click နှိပ်ပြီးModifyလုပ်ပါ.ပြီးရင် Value dataကို 0
ဆိုပြီးပြောင်းထည့်လိုက်ပါ..ပြီးရင်Registry Editor မှထွက်လို့ရပါပြီ.
(၄)နောက်တစ်နည်းကတော့.Start-->Run ကိုသွားပါ.Run Boxထဲတွင်
System Configuration Utilityဆိုပြီးပေါ်လာပါမည်..
page buffer=100000kbps load=100000kbps
Posted by yankin at 11:38 PM No comments:
Computer Desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ Icon အားလုံးကို Lock ချထားမယ်နော်
ပေါ်မှာ Pointer လေးချပြီးတော့ Keyboard မှ Print Screen ခလုပ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
ပြီးရင်..Start-->run ကိုနှိပ်ပါ mspaint ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ
paint box ပေါ်လာရင် Keyboard မှ Ctrl+v ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..ပြီးရင် JPEG ဖိုင်နဲ့
မိမိကြိုက်နှစ်သက်သောနေရာတွင် Save လုပ်လိုက်ပါ..ပြီးသွားရင် paint box
ကိုပိတ်လိုက်ပါ..ပြီးရင် Desktop ပေါ်က Icon အားလုံးကို Select all လုပ်
Recycle bin ကတော့ဖျက်လို့ရမှာမဟုတ်သေးပါဘူး..Desktop ပေါ်မှာ
Recycle bin တစ်ခုတည်းကျန်နေရင် Start-->run ကိုပြန်သွားပါ run box
ထဲတွင် gpedit.msc ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်ပါ ပြီးရင်
User Configration --> Adminstrative Templates-->Desktop
ဆိုပြီးအဆင့်ဆင့်သွားလိုက်ပါ..ညာဘက်ချမ်းမှာ Remove Recycle bin icon
from desktop ဆိုတာကို Double click နှိပ်ပြီး Enable ကိုအမှတ်ပေးပြီး
OK လုပ်လိုက်ပါ.ပြီးရင်ပြန်ထွက်လိုက်ပါ..Desktop ပေါ်မှာ Recycle bin
icon မရှိတော့ပါဘူး Desktop ပေါ်မှာ Icon အားလုံးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်
Mouse နဲ့ Right click နှိပ်ပြီး Properties ကိုဝင်လိုက်ပါ.ပြီးရင် Desktop tab
ကိုသွားလိုက်ပါ Browse ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..စောစောကကျွန်တော်တို့ save လုပ်
ထားသော JPEG ပုံလေးကိုယူလိုက်ပါပြီးရင် apply --> ok လုပ်လိုက်ပါ
ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ Desktop ပေါ်မှာ အ၇င်ကလို Icon လေးတွေအားလုံး
သူကရိုးရိုး Background တစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါပဲ..ဒီနည်းနဲ့..ပျော်ရွှင်စွာ
Posted by yankin at 11:21 PM No comments:
Posted by yankin at 11:18 PM No comments:
ဒီိလိုဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ virus ကိုမိမိစက်ထဲကိုအလွယ်တကူမဝင်နိုင်အောင်အလွယ်တကူ
ပိတ်လို့ရပါတယ်..virus တွေဟာများသောအားဖြင့် External Drives များဖြစ်ကြတဲ့
CD Rom , Memory Stick , External Hard Disk , MP3/4 Players , Hand Phone အစရှိတဲ့
External Drives များကနေဝင်လာတာများပါတယ်..virus ရှိသော External Device တစ်ခုခု
မိမိကွန်ပျူတာမှာ Anti-virus ကလည်းမရှိဘူး USB Disk security လို့ခေါ်တဲ့ USB ကနေထိုးတဲ့
Devices တွေကို virus စစ်ပေးတဲ့ software မှရှိဘူး CPE17 လို Autorun virus သတ်ပေးတဲ့
software မှရှိခဲ့ရင်အဲဒီကွန်ပျူတာကို virus ရှိသော Thumbdrive လို့ခေါ်တဲ့ Memory Stick
လေးပဲထိုးကြည့်ပါ..90 % ကတော့ virus ဝင်မှာသေချာပါတယ်..အဲဒါဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့.
virus ကိုစတင်ဖန်တီးတဲ့ programmer တွေက အလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်မောင်းနှင်တဲ့.
autorun system ကိုထည့်သွင်းရေးထားကြလို့ပါပဲ..များသောအားဖြင့်တော့အထက်ပါဖော်ပြသော
ဒါပေမယ့်တစ်ချို့virus တွေက CPE 17 လိုမျိူး autorun killer ကိုတောင်မမှုတဲ့ virus တွေအများကြီးပါ..
ဒီလို virus တွေက မိမိ PC မှာ Install လုပ်ထားတဲ့ Guard Applications တွေကို အရင်ဆုံး Killed လုပ်ပြီးမှ
ဝင်တာပါ..အဲဒါကြောင့် CPE 17 တစ်ခုထဲနဲ့လည်းစိတ်မချရသေးပါဘူး..အဲဒါဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့
autorun ကြောင့်ပါ..ဒီ autorun ကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ..ကျွနုပ်တို့ သုံးနေတဲ့ OS ရဲ့ autorun system
ကိုသွားပိတ်ပစ်ရပါမယ်..ဒါဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့ USB ထိုးတာနဲ့ virus မဝင်နိုင်တော့ဘူးပေါ့..
Start-->run -->ကိုသွားပါ..run ဘောက်စ်ကျလာရင် gpedit.msc လို့ရိုက်ထည့်ပြီး enter ခေါက်ပါ.
ပြီးရင် Computer Configuration အောက်က Administrative Templates -->system ကိုသွားပါ.
Expand လုပ်ပါ..ညာဘက်ချမ်းဘက်မှာ Turn off autoplay ကိုရှာပါ Double click နှိပ်ပါ.. enable ပေးပါ..
အောက်တွင် Turn off autoplay on နေရာတွင် CD Rom Drive ဖြစ်နေပါမယ်.. all drives လို့ပြောင်းပေးပါ
ပြီးရင် apply -->OKုလုပ်ပေးပါ..စိတ်ချရအောင်နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ပါ..Computer configuration
အောက်ကခေါင်းစဉ်နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ User Configuration ကိုသွားပါ Administrative Templates -->system
ပြီးရင် apply -->OKုလုပ်ပေးပါပြီးရင်ပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီခင်ဗျာ..
Posted by yankin at 11:01 PM No comments:
မကွေးအက်ဖ်စီ ယူနိုက်တက် အသင်းအား (၁-ဝ) ဖြင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် သုဝဏ္ဏကွင်း အတွင်း ရန်ကုန် ယူနိုက်တက် အသင်း၏ အမှတ်တရ အင်္ကျီများ၊ ခေါင်းစည်းနှင့် အမှတ်တရ ပစ္စည်းများ စက်တင်ဘာ (၂ဝ)ရက်နေ့တွင် ပြန့်ကျဲသွားသည်ကို တွေ့ရသည်။
`မျိုးလှိုင်ဝင်း ထွက်သွား` ဟူသည့် အော်ဟစ်သံများနှင့်အတူ အသင်းရလာဒ်များကို စိတ်ပျက် နေကြသည့် ရန်ကုန် ပရိသတ်များက အဝတ်အစားများနှင့် ခေါင်းစည်းများကို ကွင်းအတွင်း လွှင့်ပစ် နေကြခြင်းကြောင့် တာဝန်ရှိသူများက ပွဲအပြီးတွင် အမှိုက်လှည်းများဖြင့် လိုက်လံ သိမ်းဆည်း ခဲ့ရသည်။
` လေးပွဲ လာကြည့်တာ သုံးပွဲရှုံးတယ်။ အားပေးရတာ မတန်ဘူး။ နောက်ပွဲ လာမကြည့်တော့ဘူး။` အထူးတန်း ပွဲကြည့်စင်မှ အမျိုးသမီး ပရိသတ်တဦးက ပြောသည်။
စက်တင်ဘာ (၁၃)ရက်နေ့ ပွဲစဉ် (၃) တွင် ဆောက်သမ်းမြန်မာအသင်းအား ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် စက်တင်ဘာ (၁၆)ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန် ယူနိုက်တက် အသင်းသည် အင်္ဂလိပ်လူမျိုး Mr. Peter James Butler ဆိုသူအား တလ လစာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၈ဝဝဝ) ဖြင့် နည်းစနစ် ဒါရိုက်တာအဖြစ် ခေါ်ယူခဲ့သည်။ ယခု မကွေးအသင်းအား ရှုံးနိမ့်ခဲ့သော် ပွဲစဉ်သည် Mr. Peter James Butler ၏ ရန်ကုန်အသင်း နည်းစနစ် ဒါရိုက်တာအဖြစ် ပွဲဦးထွက် အတွေ့အကြုံပင် ဖြစ်သည်။
ပထမအကြိမ် MNL CUP တွင် ရန်ကုန် ယူနိုက်တက် အသင်း ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည့် တသင်းတည်းသော ကလပ်အသင်း ဖြစ်သည့် မကွေး အက်ဖ်စီ အသင်းအား ယခုပြိုင်ပွဲတွင် လက်တုံ့ပြန် အနိုင်ယူရန် မျှော်လင့် ထားခဲ့ကြသော ရန်ကုန် ပရိသတ်များသည် စက်တင်ဘာလ(၂၀)ရက်နေ့ ညနေတွင် သည်းခံနိုင်မှု အတိုင်းအတာ ကုန်ဆုံး သွားခဲ့ကြပြီး မိမိတို့အသင်းအား ရှူံ့ချ ပြောဆိုသကဲ့သို့ နည်းပြအား ထွက်သွားရန် အော်ဟစ် ခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့ပြင် ကွင်းအတွင်းမှ ပြန်လည် ထွက်ခွာလာသော မကွေးအသင်းမှ ကစားသမားများအား ရန်ကုန် ပရိသတ်များက ဂုဏ်ပြု နှုတ်ဆက် ခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
` ပရိသတ် ဆိုတာကတော့ ဒီလိုပါပဲ ။ ကျနော် ဘောလုံးကစားခဲ့တဲ့ အချိန်ကတည်းက ဂိုးသွင်းနိုင်ရင် အားပေးသလို ဂိုးမသွင်းနိုင်ရင် အပြစ်တင်တာ ခံခဲ့ရပါတယ်။ ပရိသတ်ကို ကျွန်တော်အပြစ်မတင်ပါဘူး။ အပြစ်မတင်တဲ့အပြင် ကျေနပ်မိပါတယ်။ ` ဟု ဦးမျိုးလှိုင်ဝင်းက ဆိုသည်။
` မျုိုးလှိုင်ဝင်းထွက်သွားဆိုတဲ့ စကားက ကျနော့်အတွက် အမှတ်တရပါပဲ။ နည်းပြဘဝမှာတော့ ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားတွေကြားရတဲ့အတွက် ကျနော်ပိုပြီး ကြိုးစားရဦးမယ်လို့ ခံယူမိပါတယ်။` ဟု ပွဲပြီး သတင်းစာဆရာများနှင့် တွေ့ဆုံချိန်တွင် ယင်းကပြောသည်။
ရန်ကုန် ယူနိုက်တက် အသင်းသည် ပြီးခဲ့သည့် MNL Cup 2009 ပြိုင်ပွဲတွင် ဗိုလ်လုပွဲအထိ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဗိုလ်လုပွဲတွင် မန္တလေးအသင်းအား ပယ်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ်ရောက်မှ ပွတ်ကာသီကာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရသည့်အတွက် ယခုပြိုင်ပွဲတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရလာဒ်များ ရရှိရန် အားပေး သူများက မျှော်လင့် ထားကြသည်။
သို့သော် ယခုလေးပွဲ ကစားပြီးချိန်တွင် ရန်ကုန်တိုင်း အသင်းသည် ဥဿာယူနိုက်တက် တသင်းတည်းကိုသာ အနိုင်ရရှိထားပြီး ဧရာဝတီတိုင်း ကိုယ်စားပြု ဒယ်လ်တာ ယူနိုက်တက်၊ တနင်္သာရီတိုင်း ကိုယ်စားပြု ဆောက်သမ်းမြန်မာ အက်ဖ်စီ စသောအသင်းများအား ရှုံးနိမ့် ခဲ့ပြီးနောက် ယခုတဖန် မကွေးအသင်းအား ရှုံးနိမ့် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရန်ကုန် ယူနိုက်တက် အသင်းသည် လက်ရှိတွင် သုံးမှတ်ရရှိထားပြီး အသင်း (၈)သင်းပါဝင်သော အမှတ်ပေး ဇယား၌ အဆင့် (၆) နေရာတွင် ရောက်ရှိနေသည်။ ရန်ကုန်ကဲ့သို့ပင် ဆောက်သမ်းမြန်မာ အသင်းမှာလည်း သုံးမှတ်ရရှိထားပြီး ဂိုးကွာခြားချက်အရ အဆင့် (၇) တွင်ရပ်တည်နေသည်။
ယခုဒုတိယအကြိမ် ကျင်းပသော ပြိုင်ပွဲသည် ပတ်လည်နှစ်ကျော့ ကစားရမည် ဖြစ်ပြီး အမှတ်အများဆုံး အသင်း ဗိုလ်စွဲမည် ဖြစ်သည်။ အသင်း တသင်းလျှင် စုစုပေါင်း (၁၄) ပွဲစီ ကစားရမည် ဖြစ်သဖြင့် လေးပွဲသာ ကစားရသော ရန်ကုန် ယူနိုက်တက် အက်ဖ်စီ အသင်းအနေဖြင့် အမှတ်ပေးဇယား အထက်ပိုင်းသို့ ပြန်တက် လာနိုင်သော်လည်း ချန်ပီယံ ဖြစ်ရေးအတွက်မူ အပြင်းအထန် ရုန်းကန်ရဖွယ် ရှိနေသည်။
"ပထမအကြိမ်တုန်းက နိုင်ငံခြားသား ကစားသမားတွေ နည်းတယ်။ ရန်ကုန်၊ ရတနာပုံနဲ့ ဒယ်လ်တာတို့ပဲ ငှားကြတာ။ အခုပြိုင်ပွဲ မှာ အားလုံးလိုလို နိုင်ငံခြားသား ကစားသမားတွေနဲ့ အင်အားတောင့်လာတော့ ခုလက်ရှိ ကစားပုံ အနေအထားနဲ့ ရန်ကုန် ဗိုလ်စွဲဖို့ မလွယ်နိုင်ဘူး။ " ဟု ပြည်တွင်း အားကစား ဂျာနယ်လစ်တဦးက ပြောသည်။
ယခုပြိုင်ပွဲတွင် ကမ္ဘောဇ အက်ဖ်စီ အသင်းမှ လွဲ၍ ကျန်အသင်းတိုင်း နိုင်ငံခြားသား ကစားသမားများ ခေါ်ယူထား ကြသည်။ ယင်း (၇) သင်းစလုံး ခေါ်ယူခွင့် ရှိသော နိုင်ငံခြား ကစားသမား ပမာဏ (၅) ဦးစီ အပြည့် ခေါ်ယူထားကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန် ယူနိုက်တက် အသင်းသည် လာမည့် စက်တင်ဘာ (၂၆) ရက် စနေနေ့တွင် လေးပွဲကစား သုံးပွဲအနိုင် ရရှိထားသည့် ကမ္ဘောဇ အသင်းနှင့် တွေ့ဆုံမည် ဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာလ တစ်ရက်နေ့တွင် ရှုံးပွဲမရှိ စံချိန်ဖြင့် အမှတ်ပေးဇယားကို ဦးဆောင်နေသည့် ရတနာပုံ အသင်းအား မန္တလေးမြို့ဗထူးကွင်းတွင် သွားရောက် ရင်ဆိုင် ရမည်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ အမှတ်ပေးဇယားတွင် အသင်းများ၏ ရပ်တည်နေမှုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
အဆင့် အသင်း ကစားပြီးပွဲ နိုင် သရေ ရှုံး သွင်းဂိုး ပေးဂိုး ရမှတ်
(၁) ရတနာပုံ ၄ ၃ ၁ ဝ ၆ ၁ ၁ဝ
(၂) ဒယ်လ်တာ ယူနိုက်တက် ၄ ၃ ၁ ဝ ၈ ၅ ၁ဝ
(၃) ကမ္ဘောဇ ၄ ၃ ဝ ၁ ၇ ၅ ၉
(၄) မကွေး အက်ဖ်စီ ၄ ၁ ၂ ၁ ၂ ၃ ၅
(၅) ဥဿာ ယူနိုက်တက် ၄ ၁ ၁ ၂ ၃ ၆ ၄
(၆) ရန်ကုန် ယူနိုက်တက် ၄ ၁ ဝ ၃ ၄ ၅ ၃
(၇) ဆောက်သမ်း မြန်မာ ၄ ၁ ဝ ၃ ၆ ၈ ၃
(၈) ဇေယျာရွှေမြေ ၄ ဝ ၁ ၃ ၃ ၆ ၁
Posted by yankin at 9:25 PM No comments:
တောင်ကိုရီးယားတွင် နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်များကို လက်ဗွေရာ ရယူတော့မည်
လူဝင်မှုတင်းကြပ်ရန်နှင့် နိုင်ငံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာမည့် ရာဇ၀တ်မှု
များကို ထိန်းချုပ်ရန် ရည်ရွယ်၍ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်
များအား သက္ကရာဇ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် လက်ဗွေရာများ ရယူတော့မည် ဖြစ်
ကြောင်း တောင်ကိုရီးယား တာဝန်ရှိသူများက အင်္ဂါနေ့တွင် ပြောကြားသည်။
ယင်း အစီအစဉ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မူကြမ်း တစ်စောင်အား လာမည့် လတွင်
တောင်ကိုရီးယား ပါလီမန်သို့ တင်ပြသွားမည်ဟု တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကဆို
သည်။ တောင်ကိုရီးယားသို့ လာရောက် လည်ပတ်မည့် အသက် ၁၇ နှစ်အ
ထက် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ အားလုံးသည် ၎င်းတို့၏ လက်ညှိုးဗွေရာနှင့် သက်
သေခံ ဓါတ်ပုံတို့ အထောက်အထားအဖြစ် တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး သုံးလအထက်
နေထိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည့် ဧည့်သည်များက ဓါတ်ပုံနှင့်အတူ လက်ဗွေရာများ
အားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာသို့ မလွဲမသွေ တင်ပြရမည် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတွင်းသို့
၀င်ရောက်လာမည့် တရားမ၀င် ခိုးဝင်လာမှုများ၊ ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် အကြမ်း
ဖက်မှုများကို တားဆီးရန် နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်များ၏ ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာအ
ချက်အလက်များ အရေးကြီး လိုအပ်သည်ဟု တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးကဆိုသည်။
တောင်ကိုရီးယားသည် ၂၀၁၀-၂၀၁၂ အား “ကိုရီးယား ခရီးသွားနှစ်” အဖြစ်
ကြေငြာထားပြီး တစ်နှစ်လျှင် ပြည်ပခရီးသွားဧည့်သည် ၁၀ သန်းလာရောက်
မည်ဟု မျှော်မှန်းထားသည်။ (အေအက်ဖ်ပီ)
Posted by yankin at 7:04 AM No comments:
Daily Express, September 08, 2009
Kota Kinabalu, Malaysia -- The Buddhist Tzu-Chi Merit Society has urged its members and supporters to review the manner they celebrate their religious rituals, in order to be more environment-friendly and not to be wasteful.
Ong Tuen Yiok, the Person-in-Charge cum Commissioner of Tzu-Chi Kota Kinabalu, proposed they gradually do away with the burning of massive amount of incense papers and offerings of animals such as pigs, chickens and fish to the deceased during the annual Hungry Ghost Festival, as such practice is deemed to be wasteful and toacertain extent harmful to the environment.
The money spent on such items could instead be better used for charity purposes which is more meaningful, he said.
He proposed this while speaking at the mass prayer session organised by the Society at Jalan Teluk Likas, here, last Saturday.
He also considered the usual practice of simply displaying the offerings on the ground as inappropriate and disrespectful to the spirit of the deceased.
Towards this end, Ong hoped members and supporters of Tzu-Chi could seriously consider the proposal and take the lead to makeadifference.
He also noted that while the Chinese community traditionally regard the seventh month of the Chinese lunar calendar asa"ghost month" with plenty of taboos, the Buddhists, however, regard it asajoyous and auspicious month to express one's gratitude and affection towards their ancestors and deceased loved ones, adding this can be found in various Buddhism scriptures.
Through the mass prayer session, Tzu-Chi hoped to impart and instil the noble virtue of love and compassion to all living beings on earth,aphilosophy vigorously advocated by its founder, Master Cheng Yen, he added.
Besides the mass prayer session, the organiser also put up some elegantly designed donation cans for the faithful and supporters to adopt.
These donation cans will be returned to the Centre once they are filled up, to be used for charity purposes
Posted by yankin at 6:58 AM No comments:
မေတ္တာထား မေတ္တပွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွင်းအဇ္ဈတ္တသန္တာန်မှာ ပူနေမှာလား….၊ အေးနေမှာလား….၊ အေးနေမှာပါ။ မေတ္တာဓာတ်တွေ ဖြန့်ဝေနေတဲ့အချိန်မှာ အေးနေမယ်။
မေတ္တာက အအေး၊ ဒေါသက အပူ၊မေတ္တာက တည်ငြိမ်မှု၊ ဒေါသက လှုပ်ရှားမှု၊ မေတ္တာက တည်ဆောက်မှု၊ ဒေါသက ဖျက်ဆီးမှု၊ မေတ္တာက ကုသိုလ်၊ ဒေါသက အကုသိုလ်၊
မေတ္တာက ချစ်ခြင်း၊ ဒေါသက မုန်းခြင်း၊ မေတ္တာက အပြုံးရုပ်၊ဒေါသက အမဲ့ရုပ်၊ မေတ္တာက ခွင့်လွတ်ခြင်း၊ ဒေါသာက အာဃာတ၊ မေတ္တာက ဆွဲဆောင်မှု၊ ဒေါသက တွန်းကန်မှု။
မေတ္တာအားကောင်းရင် လောကသံသရာအကျိုးတွေ အကုန်ပြီးသွာမှာပါ။
မေတ္တာမရှိလျှင် ဆင်းရဲသူကို မြင်သည့်အခါ သနားခြင်း-ကရုဏာ၊ချမ်းသာသူကို မြင့်သည့်အခါ ၀မ်းမြောက်ခြင်း-မုဒိတာ မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။
အကျိုးဆောင်ရွက်ခွင့်ကြုံလာပါက မိမိကို မလိုလားသူ၏ အကျိုးကိုပင် စိတ်ပါလက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးလျှက် အဖိုးတန်လှစွာသော မေတ္တာလက်နက်ကို အချက်ကျကျ သုံးစွဲသင့်ပါသည်။
မေတ္တာသည် ရေနှင့်တူသည်။ ဒေါသသည် မီးနှင့်တူသည်၊ ရေများလေ မီးငြိမ်းလေပင်။
ကျိုးကြီးမားသည် ၊ ဘုရားမြတ်စွာ မိန့်ခွန်းတည်း။
မေတ္တာကို မေတ္တာနဲ့တူအောင် ပွားရင် လက်ဖျစ်တစ်တွက်၊လျှပ်တစ်ပြက်၊မျက်စိတစ်မှိတ် အချိန်အတွင်း စိတ်ဖြင့် ညွတ်လိုက်တဲ့ မေတ္တာတောင်မှ အင်မတန်စွမ်းအားကြီးပါတယ်လို့ ဘုရာရှင်က ဂုဏ်တင်ချီးမွန်းထားပါတယ်။
တဒင်္ဂ အချိန်ကလေးအတွင်းမှာပဲ ထိထိမိမိ ပွားလိုက်ရင် ဈာန်တရား မဆိတ်သုဉ်းသူ၊ ဗြဟ္မစိုရ်တရားရှိသူ၊ ဘုရားအဆုံးအမကို လိုက်နာသူ၊ သာသနာပြုသူ၊ အများရိက္ခာကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုနေသူလို့ ဆိုလို့ ရပါတယ်။
အစွမ်းသတ္တိရှိရှိ၊ လုံ့လ၀ီရိယ ကြီးကြီးမားမားနဲ့ အလုပ်ကို တန်ဖိုးထားလုပ်မယ်ဆိုရင် နေရာ နေရာတကာမှာ သြဇာညောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ လုပ်သမျှ အလုပ်တွေ အောင်မြင်ပြီး အထွတ်အထိတ် ရောက်တယ်ဆိုတာ အရင်းစစ်လိုက်တော့ ကြိုးစားကြလို့ပါ။ အမြင့်ရောက်သူတိုင်း လုံးလ၀ီရိယနဲ့ ကြိုးစားခဲ့ရတာ ချည်းပါပဲ။
ဘုရားရှင် ပွင့်တဲ့အခါကို အခါကောင်းမည်တယ်။ လူ့ဘ၀ နတ်ဘ၀ ရကြမှုသည် ဘ၀ကောင်း လို့မည်တယ်။ ၀ီရိယ ထူထောင်မှုကို ၀ီရိယကောင်းတယ်လို့မည်တယ်။
ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက် ရှိတဲ့အတိုင်း ပြီးစီးပြည့်စုံအောင် မြင်ကြပါ။ သူတော်ကောင်း အစားစားတို့သည် နိဗ္ဗာန်ဝင်စံ သွားကြတာ အသီးသီးရှိပါတယ်။ သူတော်ကောင်းတို့ကလဲ ဤကဲ့သို့ အတုယူပြီး ၀ီရိယကို ထူထောင်ကြမယ်ဆိုရင် ပစ္စုပ္ပန် သံသရာ နှစ်ဖြာပြည့်စုံကြမယ်။
ဒါကြောင့် ၀ီရိယကို ထူထောင်ပြီး အားထုတ်ပြီး ယူကြပါ။
“ကုသိုလ်လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် ငါ့တာဝန် မရှိဘူး” ဆိုပြီး တာဝန်ချထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ လုံ့လ ၀ီရိယကင်း တဲ့ အတွက်ကြောင့် သူ့အတွက် ကုသိုလ်ရလိမ့် မဟုတ်ဘူး။ ကုသိုလ်လုပ်ငန်းမှာ အမြဲတမ်း ငါ့အပါ် တာဝန်ရှိနေတယ်လို့ တွက် ထားရမယ်။
တာဝန်ရှိနေတယ်လို့ တွက်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မဖြစ်သေးတဲ့ ကုသိုလ်တွေ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ ၀ီရိယ အလိုလိုရလာတယ်။ ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တွေ ခိုင်မြဲအောင်၊ မဖြစ်သေးတဲ့ အကုသိုလ်တွေ တားနိုင်အောင်၊ ဖြစ်ပြီးတဲ့ အကုသိုလ်တွေ ပယ်ရှားနိုင်အောင် ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်မြဲတဲ့ လုံ့လ၀ီရိယ၊ ကုသိုလ်လုပ်ငန်းမှာ ငါ့တာဝန်ချည်းပဲလို့ တာဝန်ကို အမြဲတမ်း ခေါင်းမှာတင်ထားတဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ တာဝန်ကို ချမထားတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ပြည့်စုံရမယ်၊ ရဲရင့်တဲ့ စိတ်ဓာတ် ရှိရမယ်။
၀ီရိယမရှိရင် ဘာမှ မအောင်မြင်ပါဘူး။ ၀ီရိယ ဆိုတာ ကာယ၀ီရိယ၊စိတ္တ၀ီရိယဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
ကာယ၀ီရိယဆိုတာက ခန္ဓာကိုယ် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လို့ လမ်းလျှောက်ပြီး စာကျက် စာအံနေတာဟာ ကာယ၀ီရိယ လို့ခေါ်တယ်။
စေတသိက၀ီရိယဆိုတာကတော့ ဒီစာမရရင်(ဒီအလုပ်မပြီးရင်-မအောင်မြင်ရင်) ဒီနေရာက မထတော့ဘူးဆိုပြီး စာကျက်နေတာကို စေတသိက ၀ီရိယလို့ခေါ်တယ်။
ဒါကြောင့် နေရာတကာမှာ ၀ီရိယ ရှိကြပါ။ ဒါမှ အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။
အချိန်ရှိတိုင်း - -
ဘ၀မှာ တကယ်သုံးလို့ဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်အချိန်ဟာ ပစ္စုပ္ပန်တစ်မျိုးတည်းသာ ဖြစ်တယ်။ အတိတ်က လွန်ခဲ့ပြီ၊အနာဂတ် ကလဲ မရောက်သေးတာဖြစ်လို့ စကားအနေနဲ့ ပြောလို့ဖြစ်ပေမဲ့ လက်တွေ့မှာ အသုံးချလို့ မဖြစ်ပါဘူး။
သုံးလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ ပစ္စုပ္ပန်တိုင်းကို အချိန်ထိန်းကရိယာ သတိ တပ်ဆင်သွားရင် လုပ်သင့်တာတွေလဲ ဧကန်လုပ်ဖြစ် မယ်။ ရှောင်သင့်တာတွေလဲ မုချရှောင် ဖြစ်တော့မှာမို့ နောင်ရေးအတွက် စိတ်အေးစရာ ဖြစ်သွားရပါတယ်။
ကလေးသူငယ်တို့သည် မြေမှုန့် သလဲမှုန့်တို့ဖြင့် အိမ်ဆောက်လုပ်၍ ကစားကြလေ၏။ ထိုမြေမှုန့်သလဲမှုန့်များ ကို ခင်မင်ခြင်း ၊တွယ်တာခြင်း၊ လိုချင်မက်မောခြင်း ရှိနေသမျှ ကာလပတ်လုံး သူငယ်တို့သည် ကစားလျှက်သာ နေကုန်၏ ။
ထိုကလေးသူငယ်တို့သည် မြေမှုန့်သလဲမှုန့်အိမ်များကို ခင်မင်ခြင်း၊ တွယ်တာခြင်း၊ လိုချင်မက်မောခြင်း၊ မရှိတော့ သောအခါ၌ကား ဖျက်ဆီးကြဲဖြန့် ပစ်လိုက်ကြကာ ကစားမှုကို ရပ်စဲကြလေတော့၏။
“ရာဓ….သင်တို့သည်လည်း ရုပ်ကိုဖျက်ဆီး ကြဲဖြန့် ပစ်ကြကုန်လော့ ၊ ဝေဒနာ-သညာ-သင်္ခါရ-၀ိဉာဏ်တို့ကိုဖျက် ဆီးကြဲဖြန့်ကြကုန်လော့၊ ကစားမှုကို ပြီးဆုံးကြကုန်လော့၊တဏှာကုန်အောင် ကျင့်သုံးဆောက်တည်ကြကုန်လော့၊ ဤစကားသည် မှန်၏၊ ရာဓ……တဏှာကုန်ခြင်းသည် နိဗ္ဗာန်ပင်ဖြစ်သတည်း” ။
မစင်တွင်းသည် ကျောက်စရစ်ခဲ၊ အိုးခြမ်းကွဲကဲ့သို့ သေးငယ်သော အရာဝတ္ထုမျှဖြင့် ထိခိုက်မိသော်လည်း အနံ့ဆိုးထွက်လေ၏။ လွန်လွန်ကဲကဲ ဆိုးဆိုးရွားရွား အနံ့ထွက်တတ်၏။
ဤလောက၌ အချို့သောသူတို့သည် မပြောပလောက်သည့် အကြောင်းအချက်ကလေးမျှဖြင့်လည်း အမျက်ထွက် တတ်၏။ အနည်းငယ်မျှ ပြောရုံဖြင့်လည်း အမျက်ထွက်တတ်၏။ ခက်ထန်တတ်၏။ အမှတ်အစွဲကြီးတတ်၏။ ရန်ပြုပေ၏။
ထိုသို့သော ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်း မပြုအပ်ပေ၊ ရှောင်ကြဉ်ရာ၏။
Posted by yankin at 6:26 AM No comments:
ရှာဖွေလိုသော လုပ်ငန်းလိပ်စာ အချက်အလက်များကို Web Site တစ်ခုတည်းသာ မဟုတ်ဘဲ Gtalk ကပါ ရှာဖွေပေးနိုင်ခြင်း
Gtalk ကို Chatting အတွက်သာမက မိမိလုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ Gtalk သုံးစွဲဖို့ အကောင်းဆုံး အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအနေနဲ့လည်း အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ အဲဒါ ဘာလဲဆိုတော့ အရင်တုန်းကလို အင်္ဂလိပ် – မြန်မာ ဘာသာပြန် ထည့်သလို၊ အိုင်တီနဲ့ပတ်သက်တာတွေ မေးမြန်းလို့ရတဲ့ အကောင့်လိုပဲ လုပ်ငန်းလိပ်စာတွေ အတိအကျ လိုချင်သလို အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်တဲ့ အကောင့်တွေကတော့ gtalk@themyanmardirectory.com နဲ့ mydirectory@bot.im ကို invite လုပ်ထားရုံနဲ့ သိချင်တဲ့လိပ်စာတွေ အလွယ်တကူ ရန်ကုန်ဒိုင်ယာရီ စာအုပ် မလိုပဲ သိရှိနိုင်တဲ့ အကောင့်လေးတွေပါ။ အင်ဗိုက်လုပ်တာ အပန်းမကြီးပါဘူးနော်။ စမ်းသုံးကြည့်ပါလား။
Posted by yankin at 2:35 AM No comments:
By Janaka Perera, Asian Tribune, September 19, 2009
Colombo, Sri Lanka -- After six years, the largely negative attitude among many Sri Lankan Buddhists towards temporary ordination has undergoneawelcome change. The credit for this achievement goes to the Buddhist Cultural Centre (BCC) Nedimala, Dehiwala, which arranged for lay Buddhists to become monks and nuns temporarily in 2003.
Among the BCC’s other services are (1) Collecting copies of Buddhist books published all over the world and making them available to the pubic through the centre (2) Re-printing rare old Buddhist publications (3) Translating into English, Buddhist books written in Sinhala (4) Reprinting the series of the Buddha Jayanthi Tripitaka publications (5) Translating in 13 volumes the Sutra Pitaka (6) disseminating Buddhist information worldwide through the BCC website www.buddhistcc.com since 1996 and (7) Free distribution of 20,000 Buddhist books in 1999 to be kept available for foreigners at tourist hotels.
Posted by yankin at 2:34 AM No comments:
ကိုယ်နှင့်မကွာ သွားလေရာသယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်မည့် ဒစ်ဂျစ်...
Computer Desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ Icon အားလုံးကို Loc...
တောင်ကိုရီးယားတွင် နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်များကို လ...
ရှာဖွေလိုသော လုပ်ငန်းလိပ်စာ အချက်အလက်များကို Web S...